Global Voices teny Malagasy » Ireo Krizin’i Darfur: Miteny Ireo Blaogera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Septambra 2018 13:13 GMT 1	 · Mpanoratra Vandu Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Sodàna, Mediam-bahoaka
Nipoitra tao anatin'ireo gazety tamin'ny taona lasa ny faritra andrefan'i Sodana ao Darfur rehefa nafindra toerana ireo sivily an-tapitrisany, vokatr'ireo ady nifanaovan'ny andiana mpikomy sy ireo milisy Janjaweed mpomba ny governemanta Sodaney. Tafiditra koa tao anatin'ny famonoana sivily tsy manantsiny sy ny fanolanana vehivavy ireo milisy Janjaweed, namela tahotra maharitra sy horohoro nanerana ny toerana rehetra nalehany. Ho an'ny sasany, fandringanana faobe io – famonoana olona marobe izay nikatsaka fotsiny ny hanana izay ho ambarany momba ny nitantanana ny fiainan-dry zareo. Ho an'ny hafa, loza goavana tsy azo ekena mamely ny maha-olombelona io, vokatry ny hetsi-pikomiana ao Darfur, izay tokony hatsahatra farafaharatsiny. Nalefa ireo tarika avy amin'ny Fiombonambe Afrikana mba hitandroana ny fandriampahalemana miaraka amin'ny fanampian'ireo fikambanana iraisam-pirenena, toa ny Firenena Mikambana, ny Fiombonambe Eoropeana ary Etazonia. Tokony hitohy ny talata 29 novambra 2005 ireo fifampiraharahàna mikasika ny fandriampahalemana nifanaovan'ireo tarika mpikomy sy ny governemanta Sodaney (nizotra teo ambaninà fanelanelanana izy ireo hatrizay) tao Abuja renivohitra Nizeriana. Miasa mavitrika ny tontolombolongana miresaka ny krizy ao Darfur. Mandinika blaogera vitsivitsy sy izay ambaran'izy ireo mikasika io olana io izahay.
Ny Sleepless in Sudan , blaogy iray an'ny mpiasa mpanao asa soa ao Darfour no mety ho azo ampitahaina amin'ny tomponandraikitra voalohan'ny tontolombolongana mikasika ny fiainana ao Darfour mifototra amin'ny fitantaràna voalohany./ mivantana Nosoratan'ny vehivavy iray mpiasa mpanao asa soa, ahitana an'ireo tatitra manara-potoana mikasika an'ireo trangan-javatra ao Darfour izy io. Ity lahatsoratra ity  izay navoaka efa ho roa herinandro lasa izao dia mitaraina hoe mbola mitohy hatrany ireo fanafihana ao Darfour.
“Roa taona izao no lasa hatramin'ny nanombohan'ireo andiana mpikomy ao Darfur ny ady, ary notafihan'ireo tariky ny governemanta sy ireo milisy Janjaweed tamin'ny fomba feno herisetra ireo tanàna sy ireo sivily – saingy mitohy foana any anatin'ireo faritra marobe ao Darfur ireo zava-mahatsiravina… Tsy ny fahenoana fotsiny an'ireo mponina miteny hoe misy 50, 60 na 70 ireo maty ankehitriny, no tena mampiahiahy – fa ny tsy fandriampahalemana dia manakana foana ireo masoivoho misahana ny maha-olona tsy ho afaka hitondra resaka sakafo, rano ary fialofana ho an'ìreo iharamboina.”
Ny Sleepless in Sudan dia manadihady koa sy mitatitra momba ireo vokatra kely mahomby azo ao Darfur, sahala amin’ny fiverenan'ny masoivoho iray mpitondra fanampiana ao amin'ny toby  ary ny andiana fahafito sady farany amin'ireo fifampidinihana momba ny fandriampahalemana  izay nalahatra ho atomboka ao Abuja.
Ny blaogy, But That’s Just My Opinion , dia manana fijery somary mankahala mikasika ny fifandonana ao Darfur, mahita an'io ho sahala amin'ny fironana efa hatry ny ela tao Sodàna – maniry hametraka ny fijeriny sy ny lanjany amin'ny Afrikàna mainty maro an'isa ireo Arabo vitsy an'isa. Lazainy fa:
“Tonga mba hanjaka tao Sodana ireo Arabo ary nametraka ny mponina Negroid zanatany ho amina sata farany ambany indrindra, mitondra azy ireo ho toy ny andevo, avy amin'ny alalan'ny fomban-drazana izay niantomboka tamin'ny fahatongavan'ireo Arabo tao amin'io ampahan'i Afrika io, izay toerana nisy ny Nobia taloha, ilay sivilizasiona Afrikana goavana. Nalentikin'ny fifandonana sivily i Sodana, niaraka tamin'ireo Kristianina avy ao ambadik'i [Itompokolahy] John Garang nitarika ny Tafibahoaka ho Fanafahana an'i Sodàna, ny SPLA, niady ho amin'ny fifehezana ny faritra Atsimo tsy ho an'ireo Arabo avy any Avaratra.”
Saingy soritan'ny But That’s Just My Opinion ihany koa ny tantaran'ny fanandevozana an'ireo Afrikana Mainty nataon'ireo Arabo tao amin'ny tanibe Afrikana. Tao anatin'ny fanadihadiany farany, tonga tao an-tsaina ity fampitandremana manaraka ity rehefa i Darfur no ao an-tsaina:
“Mbola ao anatin'ny ady i Sodana ary tsy misy fiafaràny ny ady satria ny vahoaka Miozolomana Arabo ao Avaratra tsy vonona mihitsy hanome ny maha-olombelona ny vahoaka Negroid Mainty amin'ny maha-olombelona”
Sodana: mirona mankany amin'ireo fifampiresahana hisian'ny fandriampahalemana ao Darfur , izay tokony hanomboka ao Abuja ny The Passion of the Present.
Manontany ny blaogy Octogenarian hoe “Darfur: Aiza ny fahatezeran'ireo Amerikana Mainty. ” Ahitana ihany koa ny fizaràna Afrika-Arabo mainty ao Sodana na izay antsoiny hoe “singa fototra ara-poko” amin'ny fifandonana, mifanamby amin'ireo mpitondra Afrikana-Amerikana ny Octogenarian fa hampiakatra ny feo hanohitra ny ataony hoe “fandripahana faobe” ao Darfur:
“…Tsy naharaka ny hatezeran'ireo Afro-Amerikana tena mpikatroka manan-danja tao Darfur aho, anisan'izany i Louis Farrakhan, Georgia Congresswoman Cynthia McKinney, Al Sharpton ary Jesse Jackson. Ny tena manaitra dia ny fihariharian'ny tsy naha-teo an'i Farrakhan, filohan'ny Firenena Silamo, ao anatin'ny ezaka fiarovana an'ireo Miozolomana mainty fihodirana mpiray firenena aminy ao Afrika. Raha toa naneho ny hatezerany manoloana ny famonoan'ireo milisy arabo an'ireo Afrikana Mainty ireny mpikatroka ireny, azo antoka fa natao nangingina ilay izy.”
Ny fahasarotan'ny krizy ao Darfur dia taratra avy ao anatin'ny fahasamihafan'ireo feo eny anaty tontolombolongana. Ao anatin'ny fotoana maharitra, tsy ho tratra ny fandriampahalemana raha toa tsy misy ny finiavana ara-politika ho amin'izany. Tokony hanantena isika fa hanome vokatra mahomby ireo fifandresen-dahatra ao Abuja.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/23/124529/
 Sleepless in Sudan: http://sleeplessinsudan.blogspot.com/
 Ity lahatsoratra ity: http://sleeplessinsudan.blogspot.com/2005/11/attacks-are-not-stopping.html
 ny fiverenan'ny masoivoho iray mpitondra fanampiana ao amin'ny toby: http://sleeplessinsudan.blogspot.com/2005/11/some-hopeful-news-comes-across-my-desk.html
 ny andiana fahafito sady farany amin'ireo fifampidinihana momba ny fandriampahalemana: http://sleeplessinsudan.blogspot.com/2005/11/its-21st-of-november-and-this-means.html
 But That’s Just My Opinion: http://butthatsjustmyopinion.blogspot.com/2005/10/arab-facist-in-dafur.html
 mirona mankany amin'ireo fifampiresahana hisian'ny fandriampahalemana ao Darfur: http://platform.blogs.com/passionofthepresent/2005/11/darfur_rebels_s.html
 Darfur: Aiza ny fahatezeran'ireo Amerikana Mainty.: http://octogenarian.blogspot.com/2005/11/darfur-where-is-american-black-outrage.html